Dr Saacid oo Muqdisho uga qayb galay dibad-bax lagu taageerayo shirka London+Sawiro – SBC
Dr Saacid oo Muqdisho uga qayb galay dibad-bax lagu taageerayo shirka London+Sawiro
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) xubno ka tirsan golihiisa wasiiradda, xildhibaano, gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir, saraakiisha ciidanka, fanaaniin iyo marti sharaf kala duwan, ayaa maanta ka qeyb-galay dibad bax lagu taageerayo shirka London.
Banaabaxaan waxaa soo qaban qaabiyey maamulka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah oo matalayay dhamaan degmooyinka gobolka Banaadir iyagoo caalamka u-muujiyey sida shacabka Soomaaliyeed ula dhacsanyhiin shirka London iyo natiijada ka soo baxda.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ahna ku simaha gudoomiyaha Sheekh Cali Guure ayaa si cad u sheegay in dadka ku nool Muqdisho oo dhibaato nooc kasta ah soo maray ay maanta u heelan yihiin inay helaan nabad, hurumar, caddaalad, iyo dowladnimo ayna yihiin shacab kalsooni buuxda ku qaba madaxdooda islamarkaana taageersan go’aan kasta oo ay soo gaaraan.
Sidoo kale waxaa goobta hadalo qiiro leh ka jeediyey Wasiirka Warfaafitna Boostadad iyo Isgaarsiinta Mudane cCbdullahi Cilmooge Xirsi, oo aad uga hadlay wax qabadka dowaldda muddadii yarayd ee ay jirtay
“Nabadaan aan maanta isugu nimid kuma imaanin si fudud, banaabaxaana wuxuu calaamad u yahay sida shacabka Soomaaliyeed ay u taageersan yihiin shirka London oo ay ka soo qayb galeen 55 isugu jira dowlado iyo hay’ado caalami ah. Waana mid ka duwan shirkii horaanta sanadkii 2012. Shirkaan dowladda Soomaaliya ay leh hogaankiisa iyo inay soo jeediso baahideeda,” ayuu yiri Cilmooge.
Wasiirka Arrimha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdi Kariin Xuseen Guuleed ayaa u mahadceliye dadkii isugu yimid banaabaxaan, isagoona xasuusiyey in dadku ay noqdaan Boolis si dalka wada-jir loogu soo celiyo nabadda.
“Waxaa lagama maarmaan ah in qof kasta u shaqeeyo sidii inuu Boolis yahay, taas weeye wadada kaliya oo aan ku heli karno nabad buuxda, nuxurka banaabaxaana waa inaan taageerno shirka Lonodon, waxaana ka rajaynaynaa in ay ka soo baxaan go’aamo gaarsiin kara Soomaaliya horumar , si loo yiraahdo Soomaaliya waxaa qaranimadeedii soo celiyey mirihii ka soo baxay shirka London,” ayuu yiri wasiirka oo dhanka kale sheegay in dowladu ku dadaalayso siidii gacan bir ah loogu qaban lahaa amniga.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ayaa ka hadlay ahmiyadda Shirka London, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay fursaadii ugu wanaagsanayd ee soo marta Soomaaliya ee caalmaku si wada jir ah ugu taageero xasilita, cadaalada, dhaqaalaha iyo guud ahaan horumarka Soomaaliya.
“Waa markii ugu horeysay oo saxiibadeena caalamka ay si wada jir ah ugu istaagaan taageerada Soomaaliya. Waa markii ugu horaysay oo caalamku si qoto dheer u dhagaysto waxa umadda Soomaaliyeed ay rabto iyo siday wax u rabto. Waa fursadii ugu weynayd ee saxiibadeena caalamku ku doonayaan in ay gacan nagu siiyaan sidii aan dalkeena dib ugu dhisan lahayn,” ayuu yirir Ra’iisul Wasaaruhu.
Raysul Wasaaraha ayaa faah-faahiyay qorshaha shirka Lonodon looga hadlay ee ku wajahan sidii Soomaaliyada cusub ay ku soo kaban lahayd.
Dhanka sugida amniga waxaa uu ka yiri:-
Sumcadeena iyo dowladnimadeenu waxay ku jirtaa inaan si buuxda u mulkino masiirkeena, aana noqono wadan nabad ah oo ay ku nooshahay ummad nimaadsan oo isku dhaqda qorshe ay raali isaga tahay.
Waan ku qasbanahay cid kasta oo wadadaas cad ee aan hayno isku dayda inay naga leexiso ama carqaladayso inaan iska qabano. Taasna waxaan ku gaari karnaa anagoo yeelana awood ciidan oo aan ku muquunino caddowgeena guddaha ee ay ugu horeeyaan kooxaha argagixisada ah, burcad badeeda iyo kuwa caadaystay inay shacabkeena intiisa tabarta daran dhibaateeyaan. Ujeedka qorsheheena ku aadan sugidda amnigu waa sidaas, waana taas mida caalamku ku qancay ayna doonayaan inay nagu garab istaagaan oo shirka London ku saab-san yahay.
Dhanka Cadaaladda waxaa uu yiri:-
Waxaana naga go’an inay caddaaladdu shaqayso oo ay dhamaato ama joogsato ku tagri falkii awooda iyo xadgudubka xuquuqda shacabka nooc kasta oo uu yahay. Si aan taas uga guul gaarno waxaan dajinay beesha caalamkana u gudbinay qorshe 4 sano ah oo aan ku fariisinayno tiirarka caddaaladda dalka.
Inaan helno taageerada ugu macquulsan ee bulshada caalamku naga siin karaan dhismaha iyo dib-u-habaynta laamaha caddaaladda dalku waa mid kamid ah arrimaha ugu waa-weyn ee shirka London ku saabsan yahay. Aad baana ugu hanweyn nahay in aan taageero buuxda u heli doono sidii qofkasta oo Soomaaliya ku sugan u heli lahaa cadaalad kaafisa.
Waxaan ku rajo waynahay inaan unugyada caddaaladda dib-u habayno, oo ay maxkamadaha dalku si hufan u shaqeeyaan, xabsiyaduna dhamaan dib u hawlgalaan, iyadoo ujeedkeenu yahay in dambiilaha laga qabto umamadda, qof kastana caddaalad ku filan helo.
Dib U habaynta Hay’adaha Dhaqaalaha waxaa uu ka yiri:-
Maamulka iyo maareynta dhaqaalaha dalku maahan arrin sahlan maadaama ay waa hore burbureen hay’adihii maamulka dhaqaalaha sida bangiyadii.
Arrintaas waxaan u arragnay ka dowlad ahaan inay muhiimad weyn noo leedahay. Sidaas daraadeed, waxaan dajinay qorshe cusub oo suurto galinayna in dalku yeesho nimaad maamul dhaqaale oo hufan. Si ay u suurto gasho inaan maaliyadda dalkeena sida adag ku soo gasha lagu tagri falin ama aan lagu dhumin mashaariic aan faa’iido badan u lahayn ummadeena.
Waxaa guul noo ah inaan arrinta maamulka dhaqaalaha u helnay taageeradii aan u baahnayn ayna kamid tahay qodobada aan hordhignay shirka London ee sida buuxda saaxiibadeena caalmku nooga gacan siin doonaan.
Ugu danbayntii, Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliyeed ay gudbisay qorshe balaaran oo ka turjumaya baahideena kuna aadan sidii Soomaaliya dib loogu soo dhisi lahaa loona hormarin lahaa. Waxaana nalagu taageerayaa inaan hanano amaanka dalka guud ahaan iyo inaan ka adkaano argagixisada ragaadisay horumarkii ummaddeena iyo kii ummahadaha dariskeena.